HomeWararka Ciyaaraha MaantaAndrea Pirlo oo ku adkeysanaya inuusan ka dhaqaaqi doonin kooxda Juventus
Tababaraha kooxda Juventus Andrea Pirlo ayaa shaaca ka qaaday inuusan qorsheyneynin inuu iska casilo doorkiisa Old Lady.
guuldaradii 3-0 ahayd ee ka soo gaadhay AC Milan ayaa ka dhigtay inay kaalinta shanaad kaga jirto kala sarreynta horyaalka , iyagoo hal dhibic ka hooseeya kooxda kaalinta afaraad ee Napoli.
Mustaqbalka Pirlo ayaa hada su’aal laga qabaa, iyadoo Juve la sheegayo inuu safka ugu jiro tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane si uu bedel ugu noqdo xiddigii hore ee khadka dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, 41 jirkaan, oo badiyay 30, barbaro galay 10 iyo sideed kamid ah 48 kulan oo uu ciyaaray, ayaa sheegay inuusan qorsheyneynin inuu ka fogaado booskiisa.
“kuma fikirayo inaan iska casilo shaqada, -. inkastoo dhibaatooyin jiraan waan sii wadidoonaa inta lee ogol yahay kooxda,” Pirlo u sheegay Sky Italia .
Juve, oo si lama filaan ah looga reebay Champions League xilli ciyaareedkan oo ay la ciyaareen Porto, ayaa isha ku haysa inay ku soo laabato wadada guusha ee Serie A marka ay u safraan Sassuolo habeenka Arbacada.